Basikety – «CCCOI 2017» : misongadina ny zandary, izay nandresy ny polisy | NewsMada
Basikety – «CCCOI 2017» : misongadina ny zandary, izay nandresy ny polisy
Niditra tamin’ny andro faharoa ny fifanintsanana eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe indianina (CCCOI), taranja basikety. Hatreto, misongadina ny ekipa malagasy. Anisan’izany, ny zandary.
Fandresena fanindroany, tamin’ny lalao roa nataony sahady no azon’ny zandary (GNBC), eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina (CCCOI 2017), taranja basikety, ho an’ny sokajy lehilahy. Fihaonana tanterahina etsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina.
Taorian’ny nandreseny ny Usoni, Kaomoro, teo amin’ny andro voalohany, mbola nandavo ny Cospn, indray izy ireo, omaly. Tamin’ny isa, 91 no ho 67, ny nanilihan’izy ireo ny ekipan’ny polisim-pirenena. Ekipa efa diso mifankahalala tsara ny roa tonta, ka tsy nifampitsitsy. Hita vonombonona hatrany amboalohany anefa ny zandary, raha somary mbola natoritory ny polisy. Porofon’izany, nitarika an’isa hatrany teo amin’ireo tapa-potoana efatra nilalaovana, ny GNBC, nahitana an’i Constant. 23 no ho 16 nisarahana teo amin’ny 10 mn voalohany. 44 no ho 41 kosa teo amin’ny am-pialan-tsasatra ary 67 no ho 57 teo amin’ny tapa-potoana fahatelo. Niezaka nanao ny ho afany hatrany ry Jules sy ry Ricky, saingy betsaka loatra ny baolina tsy matin’izy ireo, ka nivadika ho valim-panafihana, ho an’ny zandary izany.
Teo amin’ny vokatra ho an’ny vehivavy, nahazo fandresena voalohany ho azy, amin’ity fifaninanana, ity ny Tamifa, rehefa nandavo ny BCM Mayotte, tamin’ny isa 65 no ho 54. Hitohy anio, ny fifanintsanana ka mbola etsy amin’ny lapan’ny Fnatanjahantena Mahamasina, hatrany ny hanatontosana izany.